सामुहिक ब’ लात्कारका २ जना आरोपीलाई जिउँदै जलाइयो, एक जनाको मृ’त्यु एकको अबस्था ग’ म्भिर – Ap Nepal
सामुहिक ब’ लात्कारका २ जना आरोपीलाई जिउँदै जलाइयो, एक जनाको मृ’त्यु एकको अबस्था ग’ म्भिर
June 9, 2022 1189
भारतको झारखण्डको गुमलामा बुधबार नाबालिगलाई सामूहिक ब ला त्कार गरेको आरोपमा दुई जनालाई जि उँदै ज लाइएको छ। घटना भएकाे थाहा पाएपछि भीडले मोटरसाइकलसहित ती युवाहरूलाई जिउँदै जलाएका हुन्।
जसमध्ये एक जनाको मृ त्यु भएको छ भने अर्का गम्भीर घाइते भएका छन्। घटना जिल्ला सदरमुकामबाट करिब १५ किलोमिटर टाढा सदर प्रहरी चौकी क्षेत्रको बसुहा पञ्चायतको एउटा गाउँको हो।
मृ त्यु हुनेमा सुनिल उराँव छन्। आशिष उराँवको अवस्था भने गम्भीर रहेको छ। उनको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घटनापछि सो क्षेत्रमा तनाव बढेको छ। गाउँमा प्रहरीहरु बाक्लो रुपमा परिचालन गरिएको भाचरतीय सन्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्। प्रहरीले बिहीबार बिहान पनि धेरैलाई सोधपुछ गरेको थियो।
स्थानीयवासीका अनुसार नाबालिका आमा बुवासँग लोहरदगाको भण्डारामा गएकी थिइन्। फर्कनका लागि आमाबुवा छोरीसँगै बस स्ट्यान्डमा उभिरहेका थिए। यसै क्रममा छिमेकी गाउँका साथीसहित ती युवा मोटरसाइकल लिएर आए। बाटोमा उभिनुको कारण परिवारलाई सोधे भने बालिकाका बुवाले बस कुरिरहेको बताए।
बालिकाका आमाबुबाले घर छिट्टै पुग्नु छ भनेपछि दुवै युवाले नाबालिग बालिकालाई मोटरसाइकलमा लिएर हिँडे। आमाबुवा साँझ अबेर घर पुग्दा पनि बालिका घरमा थिइनन्, त्यसपछि परिवारका सदस्यले बालिका खोज्न निस्किए। सो लगत्तै छिमेकी गाउँमा गम्भीर अवस्थामा बालिका फेला परिन्।
बालिकाले आफूलाई दुबै युवकले ब ला त्कार गरेको परिवारका सदस्यहरुलाई बताइन्। त्यसपछि परिवारका सदस्य दुवै युवकलाई खोज्न निस्किए। छिमेकी गाउँमा दुवै युवकलाई मोटरसाइकलसहित फेला पारे। त्यसपछि गाउँका महिला र पुरुष दुवै युवकलाई सोधपुछ गर्न पीडित बालिकाको गाउँ पुगे। बालिकाले युवकहरुसामु पूरा घटना क्रम सुनाइन्।
बालिकाको बयानपछि गाउँलेहरूले दुवै युवकहरुलाई कुटपिट गरे र मोटरसाइकलसहित दुवैको शरीरमा मट्टीतेल छर्केर आगो लगाइ दिए। घटनाको जानकारी पाएलगत्तै प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो। दुवै युवालाई अस्पताल लगिएको छ। जसमा उपचारका क्रममा एक युवकको मृ त्यु भएको छ। घटनापछि उक्त क्षेत्रमा तनाव ग्रस्त भएको छ।बाक्लो रुपमा प्रहरी गाउँमा परिचालन गरिएको छ।
Prevआज महानायक राजेश हमालको बर्थ डे , कति बर्षका भए त उनी ?
Nextकाठमाडौंका मेयर शाह र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भेटवार्ता, के भयो त कुराकानी ?
परिवारसहित अफगानिस्तानको यु,द्धबाट ज्या’ न बचाएर भागेर युक्रेन पुगेका थिए तर…